မနက်စာမစားခင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပျားရည်ကို တွဲစားပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ...! - Thadin
HomeHEALTHYမနက်စာမစားခင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပျားရည်ကို တွဲစားပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ…!
မနက်စာမစားခင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပျားရည်ကို တွဲစားပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ…!
March 15, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on မနက်စာမစားခင် ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပျားရည်ကို တွဲစားပေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ…!
မနက်အိပ်ယာထပြီး မနက်စာမစားရသေးခင်မှာ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပျားရည်ကိုတွဲပြီးစားပေးရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ခုလုံးမှာ Antibiotic တွေပါဝင်ပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။
သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ မနက်ပိုင်းအစာမစားခင် ကြက်သွန်ဖြူကို ပျားရည်နဲ့ တွဲစားပေးရင် Gastric အရည်တွေထုတ်ပေးပြီး သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်ကြွယ်ဝလို့လည်း သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
Antioxidant ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ ဆဲလ်တွေကို ပြန်လည်နုပျိုစေသလို အသားအရေကိုလည်း ကြည်လင်စေပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စေလို့ မမြင်နိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို ကာကွယ်တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပျားရည်က ချိုလို့ ကိုယ်အလေးချိန်မလျှော့ချပေးနိုင်ဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ တွဲစားလိုက်ရင် သင့်ရဲ့ အစားအလွန်အကျွံစားချင်တဲ့စိတ်ကို ထိန်းပေးပြီး ဗိုက်ကိုရောင့်ရဲ တင်းတိမ်စေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျှော့ကျစေပြီး ဟော်မုန်းကိုညီမျှစေပါတယ်။
ခေါက်တစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း (သို့) နာတာရှည်ကိုက်ကဲခြင်းတွေကို ပျားရည်က သက်သာစေပါတယ်။ ပျားရည်မှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို သက်သာစေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေပါဝင်လို့ သင်ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါပဲ။
တစ်နေ့တာလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ အားအင်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဘာလို့ အားဖြည့်အချိုရည်တွေ သောက်နေဦးမှာလဲ။
ပျားရည်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ဘယ်လိုစားမလဲ
ကြက်သွန်ဖြူ ၁၂ မွှာ
ပျားရည် ၁ ခွက်
ကြက်သွန်ဖြူကို တောက်တောက်စဉ်းလိုက်ပါ။ (သို့) ဓါးနဲ့ ပြားသွားအောင် ရိုက်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဘူးထဲထည့်လိုက်ပြီး ပျားရည်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်သေချာရောလိုက်ပြီး ဘူးကိုအဖုံးပိတ်လိုက်ကာ မှောင်တဲ့နေရာမှာ ထားပါ။ ပြီးရင် မနက်စာမစားခင် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းသောက်ပေးပါ။
ပြားရညျက ခြိုလို့ ကိုယျအလေးခြိနျမလြှော့ခပြေးနိုငျဘူးလို့ မထငျလိုကျပါနဲ့နျော။ ကွကျသှနျဖွူနဲ့ တှဲစားလိုကျရငျ သငျ့ရဲ့ အစားအလှနျအကြှံစားခငျြတဲ့စိတျကို ထိနျးပေးပွီး ဗိုကျကိုရောငျ့ရဲ တငျးတိမျစပေါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုကိုလညျး လြှော့ကစြပွေီး ဟျောမုနျးကိုညီမြှစပေါတယျ။
This Month : 40465
This Year : 235863
Total Users : 594887
Total views : 2731848